Gbasara Anyị - VideosBrochure
VideosBrochure (Idealway Tech Company) Guzo na Shenzhen, obodo nke aku na uba na nke ndoro-ndoro ochichi na nke omenaala, obodo nke etolite etolite di elu na mmelite na oke oso, ebe kachasi ekesa eletrọniki nke China, nke kachasi mkpa bu, ebe izizi broshuọ vidio. Anyị nwere uru pụrụ iche na nchịkọta ihe yana ọnụ ahịa na-achịkwa, yabụ anyị nwere ike inye ndị ahịa oke ngwaahịa dị elu yana ọnụ ahịa asọmpi.
Ma dị ka shenzhen bụ ọnụ ahịa ọnụ ahịa, ụlọ ahịa na-ekesa ahia na mba ụwa, anyị nwere ike ibute ndị ahịa ihe n'ụzọ dị iche iche dabere na ndị ahịa, oge, ma ọ bụ site na awara awara ma ọ bụ site na ikuku ma ọ bụ site n'oké osimiri, anyị nwere ike ibuga ngwongwo ahụ n'ọdụ ụgbọ mmiri ngwa ngwa. Iji chọta soplaya, gbado anya na Shenzhen, ịzụta vidiyo broshuọ, Họrọ anyị!
VideosBrochure (Idealway Tech Company) kwụrụ ụgwọ na 2009, afọ mgbe broshuọ vidiyo batara na ọmụmụ. Ngwaahịa anyị gụnyere broshuọ vidiyo na eserese foto dijitalụ. Brodị broshuọ vidiyo gụnyere kaadị azụmaahịa vidiyo, yana ntinye ederede, nha si na 2.4inch ruo 10inch.
Banyere foto foto dijitalụ, ụdị ndị ahụ gụnyere pịa bọtịnụ dpf, mmetụ bọtịnụ dpf, android dpf na ihe niile n'otu pc, nha site na 7inch ruo 27inch. Anyị na-elekwasịkwa anya na ọdịnihu ma na-agbasi mbọ ike iji akara ngosi R&D. Main ngwaahịa mbụ na-elekwasị anya na-eme n'ọdịnihu, Anyị ga-ada na ahịa ọma na-enwe ogologo oge mmepe!
Otu Bụ Ike Anyị
Anyị nwere otu ndị na-eto eto na ndị ahịa siri ike na ihe karịrị 7 afọ ahịa ahịa nke onye ọ bụla na-ere ahịa. Ha maara nke ọma ma ghọta ngwaahịa ahụ nke ọma ma nye ndị ahịa teknụzụ ọhụụ na ọrụ ndị ọkachamara 7 * 24. Ọ bụghị naanị na anyị na-ere ngwaahịa, mana ihe dị mkpa na-enyefe ahụmịhe zuru oke.
Ndị ọrụ anyị na-arụpụta broshuọ vidiyo karịa afọ 9 na injinia anyị bụ ọkachamara maka broshuọ vidiyo / foto foto dijitalụ / ngwaahịa eletrọniki ndị ọzọ. Tụkwasịnụ ahụmịhe anyị, tụkwasị obi na ogo anyị ma tụkwasị obi n’ikike anyị nwere idozi nsogbu!
Ntọala na 2009, ndị otu anyị jiri afọ 2 wepụta ngwaahịa ọhụrụ a ma mee ka ndị ahịa mara ya na ndị ahịa ya nwere mmasị. Dịka broshuọ vidio nke ọtụtụ ndị ahịa mara ma nabata, na 2012 ruo 2013 afọ, anyị webatara uto ngwa ngwa mbụ. mgbe ahụ, anyị na-eme mgbalị na-adịgide adịgide na azụmahịa nwetara nnukwu mmụba til 2018. Ugbu a, anyị bụ ndị China n'elu rụpụta nke video broshuọ / video akwụkwọ / video mkpọ ... wdg na na ụzọ a na-egbuke egbuke ga-eme n'ọdịnihu.
1. Karịsịa na broshuọ vidiyo.
2. Nha ka ngwaahịa na R&D.
3. Meenụ ka ndị ahịa meere ha ihe ha chọrọ.
4. Azụmahịa ọhụrụ bụ ọdịnihu.
Broshuọ vidiyo na foto foto dijitalụ bụ ngwaahịa isi. Azụmahịa ọhụrụ na ngwaahịa ndị ọzọ ndị ahịa anyị chọrọ bụ azụmahịa nke anyị ọzọ. Ngwaahịa anyị nwere ọmarịcha ahịa n'ụwa niile. Mana n'ihi oke uru ya na echiche oriri, isi azụmaahịa anyị na-elekwasị anya na US, Europe (Germany, UK, France, Italy Main), Middle-east (dịka UAE, Saudi Arabia na Qatar), AU. New ebe bụ nzọụkwụ ọzọ anyị banye.
1. Ileghara ruru ma lekwasị anya na mma.
2.Hold ahịa dị elu nke ọma.
3.Ngbalịsi ike ịbanye na mpaghara ọhụụ.
4. Lezienụ hà mmepụta na R&D.